gvSIG dị ka ihe ọzọ maka obodo - Geofumadas
gvSIG dị ka ọzọ na obodo
Machị, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG
N'izu a, m ga-enwe nzukọrịta ọrụ nke Project nke na-atụle gvSIG dị ka ihe ọzọ iji mezuo na obodo ebe ha na-arụ ọrụ iwu nke Territorial nke na-ekpuchi akụkụ nke Central America.
Ugbua na Latin America enwere ahụmịhe dị iche iche na ojiji nke gvSIG, na nke a, achọrọ m ịkọ otu n'ime ndị mere na Guatemala, ikekwe nke mbụ na mpaghara Central America.
Usoro nhazi nke ahụmịhe kwesịrị ịbụ otu ngwaọrụ kachasị mma nke gvSIG nwere ike iji kesaa ma kwalite ngwa ọrụ a, n'ihi na ọ bụghị naanị obodo ọ bụla ga-ewe ya n'efu. Enwere ego ọ bụghị naanị na mmejuputa ya kamakwa na nkwado n'ihi ọtụtụ adịghị ike na ọnọdụ Latin America, nke dịgasị iche site na mba mana na-esitekarị n'etiti njedebe akụ na ụba nke obodo na enweghị ike nke ọrụ mmadụ n'ihi enweghị oke nke atumatu iji kwalite ọrụ ọha. Ọ dị ka nkwado mba ụwa nwere ike ịrụ oke ọrụ na nke a, ekwuru m ya akwụkwọ ahụ, nke na-adị ugbu a ka ọ gaghị adị.
Ikekwe akụkụ kachasị baa uru nke ahụmịhe a na Sacatepéquez bụ imepụta ngwa ọrụ nwere ike ịba uru, ma ọ bụ maka imegharị ma ọ bụ maka mmelite. Ihe ngosi nke Fabián Rodrigo Camargo mere na 3as ka etinye na gvSIG webụsaịtị, ọkara afọ mana ugbu a n'ihe gbasara ọnọdụ ha. Nzukọ GvSIG na Nọvemba 2007 nke ọ na-egosipụta nsonaazụ ndị enwetara na oru a na Guatemala.
Tụkwasị na nke ahụ, site na ahụmahụ a, Camargo laghachiri n'obodo ahụ dị mma iji gosipụta ihe omume gvSIG, nke nwere ike ịbụ ezigbo nkwado na akwụkwọ ntuziaka mgbe ị na-ezi ihe, M ji ya. A na-esonyekwa map na data dị mkpa iji mepụta omume omume ahụ.
Ndi Andalusian Fund of Municipalities for Solidarity International kwadoro oru ngo a, ya na ndi otu ndi ochichi nke Sacatepéquez, Guatemala. O doro anya na ọ bara uru, ma ọ bụrụ na ọ bụghị oge a, ihe Moisés Poyatos mere, n'ihe dị ka obodo 100, na Guatemala mgbe niile na ọrụ Democratic Municipalities, nke m na-atụ anya ikwu n'oge ọzọ.
Ọ bụ ịhazi usoro nke usoro ma ọ bụ ahụmịhe nwere ike ime ka ndụ nke mbọ a gbatịkwuo, nchịkọta egosiri usoro eji eme ihe nwere ezi uche, ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị na gbagwojuru anya n'ihi ihe gvSIG 1.1 bụ, rue ugbua ọtụtụ ihe ejirila. Iji nye otu ihe atụ, ịhazi usoro Reference, ọ ga-ekwe omume site na 1.3 ma n'ihe banyere Guatemala, o nwere SRS nke ya, ọ bụ ezie na 1.9 Anụ osisi ahụ ka na-agbasa ụfọdụ n'ime nchịkọta n'ihi na o doro anya na ịbaghasị data na echiche ahụ adịghị agbanwe agbanwe.
Mmezu nke ngwanrọ n'efu na njikwa ọha na eze na mba ndị na-emepe emepe bụ usoro ọrụ na akụ na ụba.
Ọ na-ebelata "ọdịiche na nkà na ụzụ", nke ya na ihe ndị ọzọ na-emetụta mmepe.
M na-achikota nkwubi okwu, nke yiri ka ọ dị oke mma na taa taa ... na onye maara ma n'ime afọ ole na ole.
Ntinye nke GIS na mba ndi na etoolite etolite bu ihe di nkpa na ochoro nke ndi otu mmekorita ya n’uwa
Dị adị nke GIS na obodo na-adọta ndị na-eme nchọpụta ma na-enye ụlọ ọrụ nkeonwe ọrụ uru na-arụ ọrụ ọha na eze.
Ọzụzụ dị mkpa tupu na n'oge mmemme mmejuputa GIS
Software ntanetị na-echekwa njedebe akụ na ụba n'ịchụpụta ikikere
Obodo ndị ọrụ, ndepụta ndepụta, wdg. na-anọchite anya nkwado ndị otu na-achọ mgbe ha na-emejuputa ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ
Agbanyeghị GIS na mba ndị a bụ ndị na-eto eto, site na mbido, ha ga na-atụgharị uche maka usoro ihe eji ewepụta data (SDI)
Ịdị adị nke data na usoro ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa, ọ bụ ezie na ndị dara ogbenye na njirimara ihu ahịa dị nnọọ ọgaranya n'ihe ọmụma.
Ụbọchị a ga-eme na Septemba nke afọ a na Argentina bụ ihe si na nsonaazụ ya pụta na Latin America, bụ nke mgbalị ndị dị ka Venezuela mana ikekwe n’afọ a otu n’ime ihe omume ahụ ga-abụ ihe e kere eke nke ihe omume na mpaghara ndị ọzọ nke kọntinent ahụ ebe enweburu mkpụrụ ndị ọzọ hapụrụ. Ọ bụ ezie na enwere nzukọ (iwu ma ọ bụ nke na-ezighi ezi), ogbako na Guatemala nke nwere Central American, Caribbean na Mexico maka 2010 agaghị afụ ụfụ.
N'ebe ahụ, ana m agwa gị banyere mbọ ndị ụmụ okorobịa a ga-eme, na n'ihi na m maara ọtụtụ ihe banyere nraranye na ikike m maara na ha nwere ike ime nnukwu ọrụ na gvSIG. Ebe ị nwere ike kwado okwu Camargo.
Previous Post«Previous Gajes nke nsụgharị ahụ gaa Geosmoke
Next Post Aha nke AutoCAD 2010 ProjectNext »
4 Na-aza "gvSIG dị ka ihe ọzọ maka obodo"
Echere m na m ga-edozi okwu ahụ, ma mmadụ, ụbọchị ndị a, ị ga-enweta ezigbo ọchị ọbụna na ederede.
Daniela kwuru, sị:
Ihe na-eme ha na-ese anwụrụ ma ọ bụ ihe yiri popo
ụmụ nke akwa nwanyị akwụna
Daalụ maka data Alvaro, naanị taa mụ na Moisés nwere mkparịta ụka, ha nọ na ọrụ nke European Union na-akwado na ha ga-emejuputa gvSIG n'ime opekata mpe 8 nke ugwu na Honduras. Maka ugbu a, ha na-arụ ọrụ na imewe.
Na Mgbakọ nke anọ, nke ikpeazụ 4, enwere ngosipụta ọzọ na oru ngo "Democratic Municipality" na Guatemala, nke Walter Girón na Moisés Poyatos nyere.
Ị nwere ike ịjụ ihe ngosi na otu isiokwu gbasara ya:
gvSIG amalitela ịbụ ezigbo ntụzi aka na Latin America, nwere ahụmịhe mara mma na mba dịka Venezuela, Guatemala, Argentina, Brazil, Colombia ... ka anyị nwee olile anya na nzukọ XNUMX gvSIG na Latin America, nke afọ a haziri na Argentina, ga-abụ ebe nzukọ maka ha niile na mwepụta nke obodo Latin America dị ike.